Wɔreyɛ Bible Video Ahorow Wɔ Kasa Ɔhaha Pii Mu
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Basque Batak (Toba) Bislama Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chol Croatian Czech Danish Dutch English (Borɔfo) Estonian Finnish French Ga (Nkran Kasa) Galician Georgian German Greek Greenlandic Haitian Creole Hausa Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Javanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Krio Lingala Lithuanian Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maya Mfantse Mingrelian Myanmar Nahuatl (Huasteca) Nepali Ngabere Norwegian Oromo Otomi (Mezquital Valley) Persian Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tankarana Tarascan Telugu Tigrinya Totonac Tsonga Turkish Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Uzbek Valencian Welsh Xhosa Zapotec (Isthmus) Zulu
Video Ahorow Wɔ Kasa Ɔhaha Pii Mu
Wɔdze Jehovah Adasefo hɔn kasa asekyerɛ edwuma no nyim hɔn yie paa. Obodur November 2014 no, nna yɛakyerɛ Bible no ase akɔ kasa ahorow 125 mu, nye Bible ho nwoma ahorow ase akɔ kasa 742 mu. Video so kã hɛn kasa asekyerɛ edwuma no ho. Obodur January 2015 no, nna yeenya video a wɔato dzin Ebɛnadze Na Ɔkɔ Do Wɔ Hɛn Ahendzi Asa Do? no wɔ kasa ahorow 398 mu, nye video Ebɛnadze Ntsi Na Ɔsɛ Dɛ Isũa Bible No? so wɔ kasa 569 mu. Wɔyɛɛ dɛn yɛɛ iyi, na ebɛnadze ntsi na wɔyɛe?
Wɔ March 2014 mu no, Jehovah Adasefo Akwankyerɛ Kuw no maa edwumayɛbea nkorbata ahorow a ɔwowɔ wiadze nyina no akwankyerɛ dɛ wɔnkyerɛ video ahorow ase nkɔ kasa dodowara a wobotum mu, ama iyi aahyɛ Bible adzesua ho nkuran.
Video asekyerɛ hwehwɛ dɛ yedzi akwankyerɛ pɔtsee bi ekyir. Odzi kan no, kasa asekyerɛ kuw a wɔapaw no kyerɛ video no mu nsɛm ase. Odzi hɔ no, wɔpaw nkorɔfo a wɔkã dɛm kasa no dɛ wɔmbɛkenkan video no mu nsɛm no. Afei, hɔn a wɔyɛ video nye dza wɔbɔ tsie ho edwuma ba bɛkyer akasafo no ndze, wɔtsentsen ndze a wɔakyer no, na wɔyɛ kyerɛwtohɔ a ɔbɛda edzi wɔ video no mu ho edwuma. Ewiei koraa no, wɔkã dza wɔakyer no, kyerɛwtohɔ no, nye video no nyinara bɔ mu, na ɔbɛyɛ video wɔ dɛm kasa no mu a wobotum dze ato wɛbsaet do ma obiara atwe bi.
Wɔ nkorbata ahorow bi mu no, yɛwɔ nyimpa a wɔatsetse hɔn ma wɔkyer ndze na wɔyɛ video ahorow ho edwuma, na wɔwɔ ɔfese ahorow so a wɔyɛ mu edwuma. Na kasa ahorow so a wɔkã na wɔkyerɛ ase wɔ mbea a ɔwowɔ ekyirkyir no so ɛ?
Wiadze nyina no, hɔn a wɔyɛ video nye dza wɔbɔ tsie ho edwuma dze hɔn mfir ahorow kɔ dɛm mbea no kɛyɛ ho edwuma. Sɛ onyii no du hɔ a, ɔhyehyɛ kɔmpiwta a biribi a wɔdze kyer ndze wɔ do nye akasamu wɔ ɔfese bi mu, Ahendzi Asa do, anaa obi ne fie mu, na hɔ na wɔkyer kasa no. Nyimpa a wɔkã dɛm kasa no mu bi yɛ akenkamfo, binom boa akenkamfo no ma wosũa, na afofor so hwɛ dɛ akenkan no ye anaa. Wowie biribiara na sɛ hɔn a wɔyɛɛ ho edwuma no pen do a, nyia a ɔyɛ video nye dza wɔbɔ tsie ho edwuma no sesaw ne ndzɛmba na ɔkɔ beebi fofor.
Wɔ dɛm kwan yi do no, kasa ahorow a wɔyɛɛ video ahorow no wɔ mu no dodow bui bɔɔ ho mprɛnsa.
Dza efi video ahorow yi a wɔayɛ no mu aba no yɛ nwanwa paa. Siantsir nye dɛ, nyimpa pii wɔ hɔ a, hɛn video ahorow no nye dza woedzi kan ehu wɔ hɔn kasaa mu pɛn.
Kasa kor bi a wɔkyerɛɛ hɛn video ase kɔr mu nye Pitjantjatjara, a nyimpa bɔbor 2,500 na wɔkã no wɔ Australia no. Wɔkyeer akasafo no ndze wɔ kurow bi a wɔfrɛ no Alice Springs mu wɔ Northern Territory. Callan Thomas a ɔboae ma wɔyɛɛ dza wɔbɔ tsie ho edwuma no kãa dɛ: “Nkorɔfo kyerɛɛ video ahorow no ho enyigye ma ɔboor do. Kurow mu hɔfo no dze enyigye hwɛɛ video ahorow no, na wɔkɔr do ara bisaa beebi a wobenya video ahorow no bi akã ho. Wɔnntaa nnya nwoma wɔ dɛm kasa yi mu. Sɛ wɔtse a—ne tsitsir no aber a woehu no—hɔn ho bow hɔn.”
Wɔ Cameroon no, nna Adasefo ebien bi tse hɛmba mu rutu kwan wɔ esutsen bi do. Wogyinae wɔ ekuroba bi a Nkwetsia wɔ mu ase na wɔnye ɔhen no a ɔsan so yɛ tikyanyi wɔ kurow mu hɔ no kasae. Aber a Adasefo no bohun dɛ ɔhen no kã Bassa kasa no, wɔdze elɛtrɔnik efir yii video a wɔato dzin Ebɛnadze Ntsi Na Ɔsɛ Dɛ Isũa Bible No? kyerɛɛ no wɔ no kurow mu kasa mu. Ɔhen no enyi gyee mbordo, na obisaa dɛ wɔmma no nwoma ahorow a woetsintsim no bi.
Wɔ ekuroba bi ase wɔ Indonesia no, nna kurow mu hɔ sɔfo no soɛr tsia Jehovah Adasefo, na ɔhyeew nwoma ahorow a nna wɔakyekyɛ wɔ kurow mu hɔ no nyinara. Binom so a wɔwɔ ekuroba no ase hɔ no hunahunaa Adasefo no dɛ wɔbɛhyew hɔn Ahendzi Asa no. Iyi ekyir no, aporisifo anan bi kɔr Ɔdasefo bi ne fie kebisabisaa ɔnye n’ebusua no nsɛm. Nna wɔpɛ dɛ wohu dza ɔkɔ do wɔ Ahendzi Asa do hɔ, ntsi oyii video a wɔato dzin Ebɛnadze Na Ɔkɔ Do Wɔ Hɛn Ahendzi Asa Do? no kyerɛɛ hɔn wɔ Indonesian kasa mu.
Aber a porisinyi kor hwɛɛ video no wiei no, ɔkãa dɛ: “Afei na mehu dɛ saana nkorɔfo nnyim hom koraa, na wɔnntse hom ase.” Porisinyi fofor bi so bisaa dɛ: “Mubotum enya video yi na meeyi akyerɛ afofor? Video yi kyerɛ nkorɔfo kor a hom yɛ ankasa.” Sesei dze, aporisifo no ebenya Adasefo no ho adwempa, ma wɔbɔ hɔn ho ban mpo.
Sɛ innyae nnhwɛɛ dɛm video ahorow yi dze a, ebɛnadze ntsi na emmbɔ mbɔdzen nnhwɛ wɔ wankasa wo kasaa mu?